Polisy ao Amerika Latina: mitifitra hamono, lova navelan’ny fakàna tàhaka ny fiainana miaramila · Global Voices teny Malagasy
Taorian'ireo andiana fihoaram-pefy, takian'ny vahoaka ny hisian'ny fanaovaozana
Voadika ny 14 Mey 2021 14:34 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Nederlands, Ελληνικά, Français, Español
Nosoratan'i Suhelis Tejero ho an'ny Connectas, nokiraina sy navaozin'ny Global Voices.
Teo amin'ny toerana fivantanan'ny mpizahatany ao Tulum,Meksika, antoandro benanahary izao sady imason'ny olona rehetra, vehivavy iray no mitsilany amin'ny arabe ary lohalika polisy iray no manindry ny lamosiny. Victoria Salazar Arriaza, Salvadôriàna mpifindra monina, nikiakiaka mafy noho ny fanaintainany ary dia nihamodaka ny vatany. Voarakitra anaty lahatsary ny fahafatesany, izay niteraka hatezerana erantany, ary naneho indray mandeha indray fa raiki-tampisaka ao Amerika Latina ny herisetra fanaon'ny pôlisy.
Andro vitsy monja taty aoriana, tao Villa Altagracia, Repoblika Dominikàna, tena an-dàlana niverina avy nanao asa fitoriana ny pastera iray sy ny vadiny, niaraka tamina mpino vitsivitsy, no “diso fanàkana” ny pôlisy nihevitra ny fiara nisy azy ireo ho ilay nitondra olon-dratsy. Tsy nahatsiaro mihitsy ireo sisa velona tamin'izany hoe nandre fampitandremana mba hijanona avy amin'ireo pôlisy mpanao fisafoana. Fa ireo tifitra roambinifolo ihany izay nahafaty ireto mpivady vao.
Hatramin'ny faran'ny Aprily, an'arivony maro ny fizaràna lahatsary any anaty tambajotra sôsialy mampiseho mpanao hetsipanoherana tao Kôlômbia maty notifirin'ny pôlisy. Tamin'ny fiandohan'ny May, olona 19 raha kely indrindra no maty ary an-jatony maro no naratra nandritra ireo hetsipanoherana nataon'ireo Kôlômbiàna izay nanomboka tamin'ny fanoherana ny fanavaozana ny hetra, avy eo nivadika ho hetsipanoherana nanoherana ny fitomboan'ny tsy fitoviana sy ny famoretana ataon'ny fanjakana. Marobe ireo lahatsary mampiseho ny herisetram-pamoretana mahery vaikan'ny pôlisy no mameno ny media sôsialy.
Ireny ampahan-tantara ireny no vokatra farany indrindra tamin'ireo fomba firoso mahery setra sy feno famoretana lasa hita isanandro ataon'ny pôlisy manerana izao tontolo izao, toy izay hitan'ny mason'ireo mponina tao Minneapolis, Etazonia, tamin'ny Aprily. Ny zavamisy ao Amerika Latina dia vao mainka miharatsy vokatr'ireo olana ara-tantaran'ny herisetra, ny tsimatimanota ary ny faharefoan'ireo andrim-panjakana.
“Matetika ny herisetra ataon'ny pôlisy dia vokatry ny tsimatimanota niparitaka be, ny tsy fisian'ny fanarahamaso ary ny kolontsaina milalao ny manjavozavo ataon'ny andrimpanjakana,” hoy i César Muñoz, zokiolona mpikaroka ho an'ny faritra Americas, ao amin'ny Human Rights Watch, tao anaty lahatsoratra iray navoakan'ny The New York Times tamin'ny Novambra lasa teo.
Amin'ny ankapobeny, tsy manana fitokisana loatra intsony amin'ny pôlisy ireo vahoaka manerana ny faritra. Farafahakeliny, izany no hita ao anatin'ny fanadihadiana nataon'ny Barómetro de las Américas tato anatin'ny taona vitsy. Nasehon'ny tatitra 2019 momba ny faritra fa, raha be indrindra, 53 isanjato amin'ny mponina no matoky ny pôlisy, toy ny zavamisy ao Brezila tamin'io taona io. Na izany aza, any amin'ireo firenena hafa to aan'i Meksika, Paragoay, Goatemalà, ary Però, zara raha misy ampahatelony, na latsaka izany aza, amin'ny vahoaka no nilaza fa mametraka fitokisana amin'ny pôlisy.
Nisy singa iray tena nanan-danja tao ambadik'io tsy fikosiana io, naharitra an-taona maro: ny fiofànana ara-miaramila izay nivoana tamin'ny hevitra hoe asa ho an'ny sivily no tokony hosahanin'ireo manampahefana ao amin'ny pôlisy. Any amin'ny firenena sasany, manana fototra niaviana azo faritana mazava tsara izy io: ny sasany tamin'ireo hery fiarovana dia noforonina nandritra ireo taona marobe nisian'ny jadona tany amin'ilay faritra, toa an'i Shily, Brezila, ary ny Repoblika Dominikàna. Tany amin'ny hafa, toa an'i Kôlômbia, voarohirohy tamina ady nandritra ireo fotoana ratsy indrindra nifanaovana tamin'ireo vondrona nitam-piadiana ny pôlisy.
Raha ny marina, ho an'ny tranga tao Kôlômbia, asehon'ny fanadihadiana nataon'ny Barómetro fa taorian'ny 2016, manomboka miverina ny fahatokisan'ny vahoaka ny pôlisy rehefa jerena amin'ny lafin-javatra sasantsasany, rehefa nosoniavin'ny governemanta kôlômbiàna sy ny Hery Revôlisiônera Mitampiadiana ao Kôlômbia (FARC) ny fifanarahana iray hisian'ny fandriampahalemana. Niala avy amin'ny 34,9 % tamin'ny 2016, tonga 42,4 % roa taona taorian'izay, na dia manosoka hevitra aza ireo hetsika vao haingana fa hoe mety efa nihena be io isanjato io.
Tsy ela akory izay ny Fikambanana Erantany Manohitra ny Fampijaliana, fikambanana iray ialokalofan'ireo fikambanana manerana izao tontolo izao, izay fikambanana mihoatra ny 200 tsy miankina amin'ny fanjakana, no naneho ny ahiahiny manoloana ny “fironana mampahatahotra mankany amin'ny fitiavana haka tàhaka ny tafika” ataon'ireo pôlisy sivily manerana ny tany.
Ny Inter-American Dialogue (IAD), mpihevi-draharaha amerikàna, nanoratra tao anatin'ny tatitra nataony fa ny pôlisy manao fanamiana dia novaina ho “rafitra faran'izay avo lenta manaraka antanan-tohatra sy misy ambaratongam-pivangongoam-pahefana ary fandraisana fanapahankevitra faratampony,” misy rantsana tsy mifankaiza amin'ny an'ny miaramila.
Notsipihan'ilay fikambanana ihany koa ny olana iray izay mampiavaka ny fomba fiasan'ny pôlisy ao amin'ny faritra: ny fifehezana ireo hetsipanoherana. Nasongadin'ny IAD ny tranga misy ao Nikaragoà, izay efa an-taona marobe ny pôlisy no nifantoka tamin'ny fisorohana ny heloka bevava sy nikolokolo fifandraisana akaiky amin'ny vahoaka, saingy nanomboka tamin'ny 2018, nandray anjara tamina famoretana an'ireo mpanao hetsipanoherana sy ireo mpanakiana ny governemantan'i Daniel Ortega. Sary mitovy amin'izany ahitàna ny herisetran'ny pôlisy manafika ireo mpanao hetsipanoherana no hita tany Venezoelà tamin'ny 2014, sy tany Shily nanomboka tamin'ny faran'ny 2019.
Tao Shily no niainan'i Gustavo Gatica ny mangidy indrindra. “Nahita kintana kely teny rehetra teny aho, toy ny anaty sarimiaina, ary avy eo lasa maizin-kitroka ny zavatra rehetra,” hoy izy tamin'ny BBC. Lasa jamba i Gatica taorian'ny tifitra bala madinika teny amin'ny tavany nataon'ny pôlisy shiliàna, fantatra amin'ny anarana hoe carabineros tamin'ny 2019, ary lasa endrika famantarana an'ireo niharan'ny herisetran'ny pôlisy ao an-toerana izy. Ny taona 2019, tamin'ny fampiasàna fitaovam-piadiana tsy mamono ho entina mifehy ireo mpanao hetsipanoherana, an-jatony maro ireo mpandray anjara nandritra ireo volana voalohany tamin'ny korontana sôsialy tao amin'ny firenena no naratra mafy noho ny nataon'ireo manampahefana avy amin'ny pôlisy.
Niteraka hatezerana ampy ho an'ireo governemanta ny fihetsika feno herisetran'ny pôlisy, toy ny famoretana ireo mpanao hetsipanoherana tao Shily na ny fahafatesan'ireo mpivady mpitory filazantsaza tany amin'ny Repoblika Dominikàna, mba hanafainganana ny fanambaràna ireo fanavaozana anatin'ny pôlisy, zavatra izay tsy nisy an-taonany marobe tanatin'ny adihevitra pôlitika, na teo aza ireo antso nataon'ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona.